Usomabhizinisi osemncane usebenzisa izandla nezinyawo zakhe ukuze aphumelele | Scrolla Izindaba
Usomabhizinisi osemncane usebenzisa izandla nezinyawo zakhe ukuze aphumelele
Iminyakeni eminingi, ukuwasha izingubo zokulala usebenzisa izandla nezinyawo kwakuyindlela esetshenziswa iningi lemindeni yaseNingizimu Afrika.
Lokhu kwaphela ngenkathi imishini yokuwasha iqala ukusabalala, futhi isiko lakudala laya ngokuya laphela njengoba imizi eminingi yayikwazi ukuyithenga.
USmangele Ngema, oneminyaka engama-26, wase-Tembisa eMpumalanga yeGoli, ubuyisele isikhathi emuva esebenzisa le ndlela ukwenza imali ngebhizinisi lakhe lokuwasha izingubo zokulala.
Lo mfundi othweswe iziqu e-Kurhuleni West College uthathe isinyathelo sokuqala leli bhizinisi ngemuva kokuzabalaza ukuthola umsebenzi abewufundele.
Uqede ukuqeqeshwa kwakhe esibhedlela i-Tembisa ngowezi-2018, kodwa lokho akuzange kuholele ndawo.
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa, uSmangele uthe waqala ibhizinisi lakhe ngoba akukho mjovo wemali owawudingeka ukuze aqale ukusebenza. Uthe konke obekudingeka, bekuyizandla nezinyawo zakhe zombili.
“Ugogo wami ngumuntu ongenze ngabona ukuthi ukuqala ibhizinisi lokuwasha izingubo kuzongenzela imali ngiyeke ukuyicela kuye.
“Ngangazi ukuthi kuzokwenzeka lokhu, ngoba imindeni noma abantu abaningi bayanqena ukuwasha izingubo zabo, ikakhulukazi emalokishini,” kuncokola uNgema.
Uthe ibhizinisi lokuwasha izingubo zokulala lafika emqondweni wakhe ngemuva kokubona ukuthi nguyena kuphela umuntu ekhaya owayeyijabulela kakhulu inqubo yokuziwasha.
Ekuqaleni, wathola ukuxhaswa ngabangane nezihlobo futhi ngokuphazima kweso, amakhasimende amaningi afuna izinsizakalo zakhe ezihlukile.
Uthola iningi lamakhasimende akhe ngomlilo.
UNgema ukhokhisa imali engama-R90 ingubo ngayinye ebese izingubo ezimbili zokulala ezibiza imali eyi-R140, futhi uthola ukuthi abantu abaningi abanankinga nokukhokha ngoba babona umsebenzi wokuwasha izingubo ukhathaza.
“Abantu bebelokhu bewagxeka kakhulu amanani ami bengitshela ukuthi kufanele ngiwanyuse ngoba ngisebenzisa eyami insipho yokuwasha. Okwamanje angikhathazekile ngokuthi ngenza malini, inhloso yami ukuthola amakhasimende amaningi ngaphambi kokuba ngiqale ukukhathazeka ngemali,” esho.